Ataovy amin'ny sary Geometric | ny sarinao Famoronana an-tserasera
Ireto no dingana tokony harahina hahatonga anao sarin'ny tena amin'ny endriny geometrika, mampiasa Adobe Illustrator.
Ahoana no fomba anaovantsika sary miavaka geometrika?
1: Misafidiana sary izay ahitanao ny tarehy sy ny soroka.
2: Manao antontan-taratasy vaovao 600x480px ao amin'ny Adobe Illustrator ary alamino ity lamina ity:
Ataovy sary izay hanaovanao ilay fanoharana.
Mametraha sary ho mpitari-dalana.
Manaova sary an-kianja iray mitovy refy amin'ny rakitra, mandoko azy volondavenona.
3: Ampiasao ny sary fakana an-tsoratra, amboary ny drafitrao amin'ny "Eraser", amin'ny fampiasana ilay fitaovana "Borosy". Manaova tsipika mahitsy, manatsotra tsipiriany betsaka araka izay azo atao ary atsaharo ny sosona fahatelo.
4: Apetraho amin'ny 30% ny opacity hamafa ary afatory ny sosona amin'ny alàlan'ny padlock. Atombohy ny fanaovana sary avy any ambany ka hatrany aloha, amin'ny alàlan'ny fitaovana pensilihazo. Amin'ny fampiasana 1pt matevina sy mainty, soraho ny volo amin'ny fampiasana tsipika mahitsy.
5: Ataovy sary ny antsasaky ny akanjo, avy eo kopia ary apetaho eo aloha, ampiasao ny fitaovana "Avereno" ary ahodino izay naverina. Safidio ny lalana roa ary ampiasao Pathfinder> Unite Option, raha manatevin-daharana ny endrika roa.
6: Ataovy sary ny vozon'akanjo ilay akanjo fitaovana polygon, avy eo apetraho eo am-pototry ny hatoka ireo endrika.
7: Mampiasà dingana mitovy amin'ny endrika endrika; manaova sary amin'ny octagon ary safidio ireo teboka fiampitana ambony.
Afindrao amin'ny zana-tsipìka fotsy izy ireo ary / na ampifanaraho amin'ny alàlan'ny fitaovam-pandrefesana, azo atao ny mamerina io endrika io sy mampiasa azy ho an'ny tarehy, avy eo amin'ny duplicate hafa, ampiasao ny Pathfinder> Minus Front hanapahana ny endrika hatoka.
8: Mba hanampiana antsipiriany, ampiasao Fitaovana endrika ary ny fitaovan'ny pensilihazo.
9: Tsindrio ny D ary hiseho ilay sary.
10: Mba hahatonga ny molotra mampiasa hexagon. Ahinjiro ny sisiny ary ampiasao ny fitaovana mizana hanova ny endrika. Avy eo manaova sary telozoro ary ampifanaraho eo afovoany.
Mampiasà Pathfinder> Minus Front hamafana ny telozoro eo an-tampon'ny molotra, avy eo kopia ary apetaho eo alohan'ny molotra, ovay ny fandrefesana endrika ho an'ny afovoany.
11: Mba hanaovana ny maso dia ampiasao octagon amin'ny alàlan'ny -Shift + E-Eraser Tool-, esory ny faritra ambany amin'ny endrika.
Avy eo afindrao ny endriny amin'ny alàlan'ny Shift + Alt handika, hamerina ny endrika fototra sy ny fampiasana Minus Front amin'ny Pathfinder, izay ho eyeshadow, averina averina indray hanaovana lashes. Manaova sary octagon kely ho an'ny iris, avy eo ovay izy mba hahavita ny faritra ambany amin'ny maso.
12: Ho an'ny orona dia manaova octagon indray. Manova teboka maro ary asio teboka vatofantsika sasany eo am-pototry ny orona, avy eo manaova sary octagons maromaro sy endrika tsotra hafa, ampio antsipiriany sy volavola.
13: Farano ny sary, asio loko sy antsipiriany tadiavinao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » Fitaovana famolavolana » sary » Ataovy amin'ny sary Geometric ny sarinao